Wholesale, Tsika, Ballet Tutu, Ballet Performance Tutu, Ballet Mapfekero, Ballet Leotard, Mugadziri, Nyanzvi - China Vatengesi Fekitori - Fitdance ballet fekitori.
Imba > Fakisi sumo
Iyi ndiyo Fitdance.
Tine makore makumi maviri ekubudirira. Hunhu uye mukurumbira wezvigadzirwa zvedu zvakagamuchirwa zvakanaka nevatengi vekunze nekune dzimwe nyika uye vanokosheswa nenyanzvi muindasitiri yekutamba.
Isu tanga takanamatira kune bhizinesi tenet ye "Hunhu hwekutanga, Kiredhiti Kutanga", tichishandira zvikoro zvikuru zvekutamba uye vanoda zvekutamba kutenderera pasirese.
MuChina, isu takabatana zvakadzama pamwe neveimba Shanghai Ballet, Guangzhou Ballet, Hong Kong Guta Ballet nemamwe makambani emunyika ekutamba, uye takabatana nezviuru zvezvikoro zvekutamba uye masangano ekudzidzira kutamba kusvika zvino.
Kunze kwenyika, isu takashandira makambani akadai seFlashdance Performing Arts, uye takapa vatambi vanobva pasirese pasirese neakanakisa Ballet performance Tutu.
Fitdance inyanzvi yekutamba mbatya inogadzira inosanganisa dhizaini, kugadzira uye kutengesa; kambani inovhara nzvimbo inopfuura zviuru zvitatu zvemamirimita, ine zvinopfuura zana zvigadzirwa zvekugadzira, vashandi vanopfuura mazana maviri, uye goho regore rinopfuura zvidimbu zvemiriyoni imwe chete.
Pakati pavo, dhipatimendi reBallet Tutu rine vana vagadziri vehunyanzvi uye vashandi makumi maviri vevashandi vekugadzira. Tinogona kuburitsa 800 Ballet Tutu pamwedzi kuti usangane neyako tsika kana yakawanda zvido.
Isu tiri kunyanya kuita mukugadzirisa uye kugadzirwa kweyekutanga ballet zvipfeko, kusanganisira ballet Leotard, Skirt uye Kupfeka.
Panguva imwecheteyo, isu tinotsigirawo ballet Tutu's yakagadzirirwa masevhisi. Zvinoenderana nezvamunoda, tichava nekunyatsonzwisisa nyaya yenyaya yemutambo wekutamba, tichifunga nezvemavara, machira, masitaera, maumbirwo, macollocation, nezvimwe zvehembe, uye nekukupa rakanakisa dhizaini dhizaini.
Kana, iwe unogona kupa zvakananga mifananidzo kana dhizaini dhizaini yechero chigadzirwa. Vagadziri vedu vanozoshandisa misimboti yeCIS kugadzira zvakanakira iwe, uye panguva imwechete, nerubatsiro rweCAD system, tinogona kugadzirisa Tutu akakwana anozadzisa zvaunoda.
Pahwaro hwekuchengetedza chigadzirwa, isu tinosarudza iyo katoni yeiyo inoenderana saizi maererano nehoriyamu yakazara, kudzikisa vhoriyamu zvakanyanya sezvinobvira uye kudzikisa kutakura.
Tinogona kupa nzira dzakasiyana dzekufambisa dzakadai seDHL / EMS / SEA. Unogona kusarudza zvinoenderana nenguva yekuendesa yaunoda. Tichakutora mazwi zvinoenderana nehuwandu hwasimbiswa pane zvakatemwa.
DHL: 3-7 mazuva
EMS: 7-20 mazuva
Kana chigadzirwa chapera, isu tinotora mifananidzo uye titumire mifananidzo kwauri kuti iwe uzive kufambira mberi kwayo.
Kana yagadzira nhamba yebhiri rekutumira, isu tinozotumira iyo kwauri nekukurumidza sezvazvinogona uye ramba uchitevera.
Kana yasvika kwairi kuenda, tichabatana newe zvakare kukuyeuchidza kuti ugamuchire izvo zvinhu.
Kana ukagamuchira, isu tinoteedzera yayo mhando newe.
Iyo kambani ine yakakwira kuuraya, yakanyanya yakarongeka sevhisi manejimendi sisitimu. Feidance madhirezi mapfekero akagadzirwa neyakanaka danho mhedzisiro uye nyanzvi dhizaini nezvinhu zvakanaka uye zvakanaka. ine advanced performance performance zvipfeko zvekushandisa; neunyanzvi hwekugadzira; neakavimbika uye akaomarara mashandiro ebasa reFitdance vanhu, Nyatsogadzira chigadzirwa chimwe nechimwe kuti uve nyeredzi inopenya pane iyo nhanho.
Neshanduko yemabasa emadhorobha, epamberi penyika, gungwa uye kutakurwa kwemhepo, uye zvakakwana zvigadzirwa zvehurongwa, zvinonyanya kushandira kushandira vadikani kutenderera pasirese.
Kutsvaga mhando yepamusoro uye kumisikidza mukurumbira wechiratidzo ibasa redu rakasimba!
Fitdance, inokodzera yako yekutamba koshitomu.